အငြိုးရဲ့သားကောင် – Grab Love Story
အစပိုင်း မှာတော့ မမနွယ်နဲ့ သူ ..တည်းခိုခန်းတွေမှာ ချိန်းတွေ့ကာ သူတို့ ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ကာမဆန္ဒတွေကို ဖြေဖျောက်ခဲ့ကြသည် ။ နောက်ပိုင်း အတင့်ရဲ လာကြပြီး မမနွယ်ရဲ့ လင်ကြီးဦးသောင်းစိန်..မရှိတဲ့အချိန်မှာ မမနွယ်တို့အိမ်မှာဘဲ စခန်းသွားခဲ့ကြ သည် ။ အမှု ဖြစ်တဲ့နေ့က မမနွယ် က ဖုန်းဆက် ပြီး သူတို့အိမ်ကို လာခဲ့ဖို့ခေါ် သည် ..။ လင်ကြီးဦးသောင်းစိန် ခရီးထွက်သွား သည် တဲ့။ ဘသန့်ထူး လဲ မမနွယ်နဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာပြီ ..။ မမနွယ် သည် အိပ်ယာထဲမှာ အရမ်းပွင့်လင်း သည် . .။ မမနွယ် သည် သူ လိုချင်တာ မှန်သမျှကို နဲနဲမှ မတွန့်တိုခဲ့ဘဲ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေခဲ့ သည် ။ ရက်ရက်ရောရော ပေးခဲ့ သည် ။ ဒါကြောင့်လဲ..ဘသန့်ထူး သည် မမနွယ်လိုအိမ်ထောင်ရှိမလွတ်မလပ်နဲ့ ..မိန်းမတယောက်ကို တန်းတန်းစွဲ မဖြတ်နိုင်တာ ဖြစ် သည် ..။ ဘသန့်ထူး သည် မိန်းမတယောက်ကို အကြာကြီးစွဲစွဲလန်းလန်း ..အတည်အတံ့ မလုပ်ခဲ့ …။ မမနွယ်နဲ့ကျမှ ..တော်တော် ရှည်ကြာတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်နေ သည် ..။ မမ နွယ်ရဲ့အပေးကောင်းလို့ မင်း ဒီဆော်ကြီးကို အကြာကြီးထိန်းထားတာမဟုတ်လားလို့ ..သူ့ အကြောင်းကို အတွင်းကျကျသိတဲ့ ဘော်ဒါ ဇိန်ကြီးက ပြောတော့ . .ဘသန့်ထူး မငြင်း ။ “ အင်း …ဟုတ်တယ်ကွ . .မမနွယ် က တော်တော်အပေးကောင်းတယ် . .ထူးခြားတာက လူ တွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ မျှော့ပါတဲ့ မိန်းမမျိုး ကွ .ငါ့လို ၀ါရင့်နေတဲ့ ကောင်တောင် မမနွယ်နဲ့ကျတော့.ဆွဲမလိုးနိုင်ဘူး..တော်တော်ထူးခြားတဲ့စောက်ဖုတ်ကွ… . .တနည်းအားဖြင့် ညှစ်အားကောင်းတဲ့ မိန်းမပေါ့ . .လိုးလို့တော်တော့်ကို အရသာရှိတယ် . .” လို့ပြောသည် ။
ဇိန်ကြီး က “ မင်းဆော်ကြီးက လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့နော . .သတိထားအုံး . .မယားခိုးမှုနဲ့ ၀င်သွားအုံးမယ် . .” လို့ သတိပေး သည် ။ သတိပေးနေတဲ့ကြားက ဘသန့်ထူး သည် မမနွယ် နဲ့တွေ့ဖို့ သူမတို့အိမ်ကို သွားခဲ့ သည် . .။ မမနွယ် သည် ပြူတင်းပေါက်ကနေ အိမ်ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်နေ သည် ။ အပြေးကလေး လာပြီး တံခါးကို ဖွင့်ပေး သည် . .။ “ အို ကိုထူး .. မမဖြင့်မျှော်လိုက်ရတာ…မောလှပြီ . .” မမနွယ် သည် ခပ်ပါးပါး ည၀တ်အင်္ကျီတထည်ကို တထပ်ထဲ ၀တ်ထား သည် ..။ မမနွယ်ရဲ့ ဖြိုးကြွသော ရင်သားတွေက ..ထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ့ အထိန်းမရှိလို့ ဘရမ်းဘတာ ဖြစ်နေကြ သည် . .။ မမနွယ်ကို မြင်ရတာနဲ့ ဘသန့်ထူး စိတ်တွေ ဒိုင်းကနဲ ထကြွလာရ သည် . . .။ မမနွယ်သည် ဘသန့်ထူးကို တွေ့တာနဲ့ တအားဖက်ပြီး အငမ်းမရ နမ်း သည် ..။ ဘသန့်ထူး လဲ မတွေ့တာကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့မမနွယ်ကို ပြန်လည်နမ်းသည် .. ။ မမနွယ်ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်သားတွေကို ပွတ်သပ် သည် . .။ ဘသန့်ထူး စိတ်တွေ ကြွလာ သည် .. ။ မမနွယ် သည် သူမပေါင်ကြားကိုလာထိကပ်တဲ့ဘသန့်ထူးရဲ့ ..ဖွားဖက်တော်ကြီးကို..စမ်းသပ် လိုက်ရာ အလွန်မာကျောပြီး ..မတ်မတ်တောင်နေတာ တွေ့လိုက်ရပြီး ..ဘသန့်ထူးရဲ့ ခါးဝတ်လုံချည်ကို ဆွဲချွတ်လိုက် သည် ။ ဘသန့်ထူး ရဲ့ စံချိန်မှီ ဖွားဖက်တော် လိင်တန်ကြီး ဘွားကနဲ မတ်မတ်တောင်နေတာ မမနွယ်တွေ့လိုက်ပြီး ချက်ချင်းဘဲ ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ တရွတ်ရွတ် နဲ့ ..နမ်းရှုံ့လေ သည် ။ မမနွယ် သည် သူမ ခင်ပွန်းရဲ့ လိင်တန် နဲ့ ဘသန့်ထူးရဲ့ လိင်တန်က .. အရမ်းကွာခြားလှ သည် လို့ အမြဲ ပြောတတ် သည် . .။ တုတ်လဲတုတ် ..ရှည်လဲရှည်သော ဘသန့်ထူးရဲ့ လိင်တန်ကြီး ကို သူမ အရမ်း စွဲနေရတယ် လို့ တတွတ်တွတ် ပြောနေပြန် သည် . .။
တုတ်လဲတုတ် ..ရှည်လဲရှည်သော ဘသန့်ထူးရဲ့ လိင်တန်ကြီး ကို သူမ အရမ်း စွဲနေရတယ် လို့ တတွတ်တွတ် ပြောနေပြန် သည် . .။ လိင်တန် ကြီးတာ ..ရှည်တာ ကြောင့် တခုထဲနဲ့သူ့ကိုစွဲနေရတာတော့မဟုတ် …။ သူ…သူက ..သူက သိပ် လုပ်တာကိုင်တာ တော် သည် …။ မမနွယ် စုတ်ပေးရမလားဟင် . . မမနွယ်က သူ့လိင်တန် မဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကို အားမလိုအားမရနဲ့ ဆုတ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်နေရင်း မေးလိုက် သည် . .။ စုတ်ပေး .မနွယ် . .မမနွယ် စုတ်တာကို ကျနော် အရမ်းကြိုက်တယ် . . မမနွယ် သည် သူ့လိင်တန်ကြီးကို စိတ်ပါလက်ပါ နဲ့ စုတ်ပေးပါသည် .. .။ မမနွယ်ရဲ့ လက်တဖက်ကလဲ သူ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံးကို ဖွဖွလေး ကိုင်တွယ်ကစားပေး သည် . .။ မမနွယ် သည် အစုတ်ကျွမ်းတာ သူသိနေတာ ကြာပြီလေ . .။ မမနွယ် သည် သူနဲ့ မစပ်ရှက်ခင် မလိုးကြခင် ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ သူ့ကို အမြဲ စုတ်ပေးလေ့ ရှိသည် …။ မမနွယ်ရဲ့ ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားစိုင်နှစ်မွာ ကိုလဲ သူ စိတ်ကြိုက် ဆုတ်နယ် သည် . .။ မမနွယ် သည် သူ့လိင်တန်ကို အရင်းအထိ ငုံကာ စုတ်လိုက် ..လိင်တန်တလျောက် လျာနဲ့ ထိုးကလိပေးလိုက် . . လုပ်ပေးသည် . .။ မမနွယ် စုတ်ပေးတာ ကောင်းလွန်းလို့ တချက်ချက် …အရမ်းကောင်းကောင်းသွားတာ သုတ်တွေ ပန်းထွက်သွားမှာတောင် စိုးနေရ သည် . .။ မမနွယ်လဲ ဒီအချိန်မှာ အ၀တ်အစားး ဘာမှ ကိုယ်ပေါ်မှာ မရှိတော့ . .။ ဗလာကျင်းကာ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေပြီ . .။ မမနွယ် ရဲ့ ပေါင်ကြားက အမွေးမဲမဲတွေပေါက်နေတဲ့ ဆီးခုံ ဖေါင်းဖေါင်းကြီးနဲ့ အဲဒီအောက်က နီညိုညို စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြီး ကို တပ်မက်စရာ တွေ့မြင်နေရ သည် . .။ မမနွယ်မှာ စ်ိတ်ထကြွလာတဲ့အခါ စောက်ရေ တအားရွှမ်း သည် ..။
စောက်ရေတွေ စိုစိုရွဲရုံကမ သူမပေါင်ကြား နဲ့ ဖင်ကြားထဲကို စီးကျနေ သည် …။ မမနွယ်နဲ့ သူ လိုးတဲ့အခါ မမနွယ် ကို ပက်ပက် စက်စက် ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း တွေ သူ ပြော ပြီး မမနွယ်ကိုလဲ သူ့ကို ပြန်ပြောခိုင်းလေ့ ရှိ သည် …။ “ မမနွယ် စောက်ဖုတ် ယားလား . ..” “ အင်း..အရမ်းယားတာဘဲ ..မောင် …” “ မမနွယ် ..ဘာလိုချင်လဲ…” “ လီး..မောင့် လီး ..မောင့် လီး တုတ်တုတ်ကြီး ကို လိုချင်တယ် . ..” မမနွယ် သည်လိုပြောရင် သူ ပိုပြီး စိတ်တွေ ထကြွ သလိုဘဲ …။ “ လီးကြီး နဲ့ တက်လိုးပေးပါ မောင် ..လီးကြီး နဲ့ တအား ဆောင့်ပေးပါ ..မမ ယားလှပြီ ..” မမနွယ် ရဲ့ မျက်နှာ ကို သူ လီးတန်ကြီး နဲ့ ရိုက် သည် ..။ သူ့ လီးကြီးကို အရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး လီးတန်ထိပ် နဲ့ မမနွယ်ရဲ့ မျက်နှာကို ရိုက် သည် …။ မမနွယ်က ဒစ်ကားကြီးကို လျာနဲ့ ယက် သည် ..။ “ဂွေးစိတွေကို အရင် ယက် . .” မမနွယ် သည် သူ့ ဂွေးစိတွေကို လျာနဲ့ ကျကျနန ယက်ပေးပါတော့ သည် ..။ “ကြိုက်လား …” မမနွယ် ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ညှိမ့် သည် ..။ “ကြိုက်တယ်မောင်..မမနွယ် သိပ်ကြိုက်တယ် …” “ မမနွယ် ..ဖင်ကုန်းလိုက် . .. ” ၀င်းဖြူစွင့်ကားတဲ့ ဖင်ကြီးတွေ ရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ နီ ညို ညိုစောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်နေ သည် …။ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် ရမက် အရှိန်ကြောင့် အရမ်းဖေါင်းကားပြီး မို့မောက်နေသလိုဘဲ . .။ စောက်ရေတွေ ကြောင့် မမနွယ် ရဲ့ အဖုတ်ကြီး က ပြောင်လက်နေ သည် ..။ ဘသန့်ထူး သည် မမနွယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကိုင် သည် ..။ မမနွယ် မျက်လုံးလေးမှိတ် ပြီး ညည်း သည် ..။ သူ့လက်မှာ အရေတွေ စိုပေကုန်တော့ သဘောကျစွာ ရယ်မောရင်း ပေနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို မမနွယ်ကို ယက်ခိုင်း သည် ..။ မမနွယ် သည် သူ .. ခိုင်းစေသမျှကို လုပ် သည် …။ “ မောင် …” “ဘာလဲ မမနွယ် ..လိုးစေချင်ပြီလား …” “ ဟုတ်တယ်မောင်..မမနွယ် ယားလှပါပြီ ..မမနွယ်ကို လိုးပေးပါတော့ကွယ် . . .” ဘသန့်ထူး သည် ဖင်ကုန်းပေးထားသော မမနွယ်ကို အနောက်မှ လိုးပေးပါတော့ သည် ..။ စိတ်တွေ တအားထန်နေပြီဖြစ်ပြီး မမနွယ် သည် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးတာကို ကြိုက်ပြီး ခံလဲ ခံနိုင်တဲ့ မိန်းမ မို့ သူ ခပ်ပြင်းပြင်းဘဲ ဆောင့် လိုးလေတော့ သည် …။
မမနွယ်ကို စတင်ပြီး ..လိုး နေတဲ့အချိန်မှာဘဲ .. မမနွယ်ရဲ့လင်ကြီး ဦးသောင်းစိန် ပြန်ရောက်လာ သည် . .။ဘသန့်ထူးလဲ လက်ပူး လက်ကျပ်မိနေတော့ .. ..ပြူတင်းပေါက်က ခုန်ဆင်းပြီး ပြေးသည် ..။ ဦးသောင်းစိန်ကအော်ဟစ် အကူအညီတောင်းတော့ အိမ်နားနီးချင်းတွေ နဲ့ ရပ်ကွက်က လူငယ်တွေ ၀ိုင်းဖမ်းလို့ ဘသန့်ထူး ကို မိသွားကြ သည် ..။ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်များ ရဲ့ လုပ်နေကျ အတိုင်း ..ဘသန့်ထူးကို ၀ိုင်း ဗျင်းကြတော့ သည် ..။ ရဲများရောက်လာသောအခါ ဘသန့်ထူး သည် သွေးအိုင်ထဲ လဲနေပြီ …။ မမနွယ်သည် လင်ကြီး နဲ့ .. ရပ်ကွက်သားတွေ ရှေ့မှာ ဘသန့်ထူး က သူမကို မတရားကျင့်တာပါ လို့ .. တိုင်တမ်းတော့ သည် …. ။ ဘသန့်ထူး ..မဒိန်းမှုနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရ ပြီ …။ ဘသန့်ထူး အချုပ်ထဲ ရောက်သွား သည် . .။ မမနွယ် သည် လူမိသောအခါ သူမ .. အလိုမတူပါ..အတင်း တက်ကျင့်ပါ သည် ..လို့ ပြောနေပြီ ..။ ဘသန့်ထူး မမနွယ်ကို အရမ်း စိတ်ဆိုး စိတ်နာ သည် . .။ ပိုဆိုးတာက လင်ကြီး ဦးသောင်းစိန် သည် .. ငွေရေးကြေးရေး တောင့်တင်းသောကြောင့် ..ဘသန့်ထူး စ အဖမ်းခံရကထဲ က ရဲတွေကို ငွေနဲ့ ပေါက် သည် . .။ တရားရုံး ကိုငွေနဲ့ လိုက် သည် . .။
ဘသန့်ထူး ..အာမခံပင် မရ ..။ အစိုးရဆွဲချ ရှေ့နေ ဒေါ်သီရီမေ နဲ့ တရားသူကြီးမ ဒေါ်ခက်ခက်မာ တို့ သည် ဘသန့်ထူးကို ထောင်မကျကျအောင် ..လုပ်ကြပါတော့ သည် . .။ စအဖမ်းခံရကထဲက ရဲစခန်းမှာ ဘသန့်ထူး ရေရေလည်လည် အရိုက်ခံရ သည် ..။ ရပ်ကွက် က လူငယ်တွေ ၀ိုင်းဆော်လို့ ဖူးယောင်ပေါက်ပြဲ ယောင်ကိုင်းနေသော ဘသန့်ထူး သည် ရဲတွေ ထပ်ဆော်တာ ခံရတော့ သတိမေ့မြောသွားရတဲ့ အထိ ဘဲ …။ မဒိန်းကောင် ..ဆိုတဲ့ အခေါ်အေ၀ါ် ကို တွင်တွင် သုံးကြ သည် ..။ တကယ်တော့ သူ သည် မယားခိုး တယောက် သာ ဖြစ် သည် . .။ လင်ရှိမိန်းမ ကို ကြာခိုသူ ..ကြာကူလီ သာ ဖြစ် သည် ။ သူ သည် မဒိန်းကျင့်သူ မဟုတ် . .။မမနွယ် အလိုတူ တာမှ သူတို့ အကြိမ်ကြိမ် ချိန်းတွေ့ကာ ပျော်ပါးခဲ့ကြတာဘဲ . .။ ဘသန့်ထူး ကို တရားသူကြီးမ နဲ့ အစိုးရဆွဲချရှေ့နေမ တို့က ငွေစားပြီး ..ထောင်ဒါဏ်ကြီးကြီး အပြစ်ပေး ခဲ့ကြ သည် . .။ ဘသန့်ထူး မကျေနပ် . .။ လုံးဝ မကျေနပ် ..။ သူ သည် သူ့ကို အမိန့်ချတုံးက တရားခွင်မှာ ထပြီး အော်ဟစ် အကြမ်းဖက်လို့ ရဲများရဲ့ ၀ိုင်း ထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်တာကို ခံလိုက်ရ သေး သည် . .။ ထောင်ထဲ ၀င်ဝင်ချင်းလဲ မဒိန်းကောင် . .ဆိုပြီး နှစ်ကြီးသမားကြီးတွေနဲ့ .. ထောင်ဝါဒါ အမှုထမ်းတွေက ရေရေလည်လည် တွယ် သည် . .။နှိပ်စက် သည် . .။ ဖင်ဝိုင်းချဖို့တောင် လုပ် သည် ..။ မမနွယ်ရဲ့လင်ကြီးကငွေနဲ့ လိုက်ထားသလား လို့တောင် ထင်ရ သည်။
အင်းစိန်ထောင်ကြီးထဲ မတရားမှုတွေ သည် ခောတ်အဆက်ဆက်ရှိနေမြဲ ……။ အကျဉ်း သားအချင်းချင်း ဗိုလ်ကျတာတွေ အနိုင်ကျင့်တာတွေ က ရှိနေတုံးပါဘဲ …။ ဘသန့်ထူး ခဏခဏ တိုက်ပိတ်ခံရ သည် . .။ ဘသန့်ထူး သည် စိတ်တို ဒေါသကြီးပြီး ခဏ ခဏ ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါ . . ။ သူ မတရားခံရတဲ့အတွက် သူ့ကို မတရား လုပ်သူတွေ ကို လက်တုံ့ပြန် လက်စားချေ မည်လို့ သူ ဆုံးဖြတ်ထား သည် ။ ထောင်ထဲမှာ နှစ်ကြီးသမားတွေ မြှောက်ပေးလို့ ..သူ့လိင်တန်မှာ ဂေါ်လီ ထည့် ဖြစ်သွားသည် . .။ ဘသန့်ထူး အမြဲကြုံးဝါးနေတာက …. သူ့ကို လပ်စားပြီး ထောင်ထဲကို ပို့ခဲ့ ဆွဲချ ရှေ့နေမ နဲ့ တရားသူကြီးမ ကို လှလှပပကြီး လက်စားချေမည် ဆိုတာပါဘဲ . ..။ သူ့ကို အလိုမတူဘဲ ကျင့်ပါသည် လို့ လည်ဆည်ပြီး တိုင်ခဲ့တဲ့ မမနွယ်ကိုလဲ သူ လက်စားချေလို သည် . .။ များသောအားဖြင့်.. ..သူခိုးဂျပိုးများဟာထောင်ကျပြီးရင်..အပိုးကျိုးသွား.. . .နောင်ကျဉ်သွား . . တတ်ကြ သည် . .။ သူသည်ဒီလိုမဟုတ် . .သူ့ကိုမတရားလုပ်သူများကိုလက်စားပြန်ချေမည် . .လို့ ဘသန့်ထူး အမြဲ ကြုံးဝါးနေ သည် ..။ သူထောင်ထဲ ရောက်ပြီးလို့ များမကြာခင် ..အပြင်လောကမှာ ငွေစက္ကူတွေ တရားမ၀င် ကျေညာတာတို့ .. . . ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတာတွေ တို့ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလာ သည် . .။ ဆန္ဒပြပွဲတွေ တပြည်လုံး ဖြစ်နေ သည် . .။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အကြီးအကျယ်ဆုံး အရေးအခင်းကြီးတခု ဖြစ်လာ ပြီ …။ အပြင်က ခုမှထောင်ထဲဝင်လာတဲ့လူတွေကပြောပြသလိုထောင်အမှုထမ်းတွေက လဲ ပြောပြလို့ အပြင်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေကြလဲ ဘသန့်ထူးတို့ သိနေရ သည် . .။ သူထင်မထားတာ ဖြစ်လာ သည် . ..။ ထောင်တွေ ခါတာဘဲ . .။ ထောင်သားတွေကို လွတ်လိုက် သည် . .။ ဘသန့်ထူး လွတ်လာပြီ . ..။
တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းတဲ့အထဲ သူ့လက်စားချေချင်တာတွေ အတွက် ဘသန့်ထူး အရမ်း ကျေနပ် ၀မ်းသာနေ သည် . .။ သူ အပြင် ပြန်ရောက်ပြီ . ..။ အချိန် တိုတို နဲ့ ပြန်ထွက်လာပြီ . .။ သိကြရောပေါ့ .ကောင်မတွေ လို့ ကြုံး ၀ါး နေသည် ..။ အပြင်လောက မှာက ခောတ်ပျက်နေ သည် . .။ မင်းမဲ့စရိုက် ..တွေ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေ သည် . .။ ရဲဆိုတာလမ်းပေါ်မှာ မတွေ့ရ .. ။ ရဲတွေကို ထုရိုက် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ ကာလ ဖြစ် သည် ။ ရပ်ကွက်ကောင်စီ လူကြီးတွေ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ အချိန် ဖြစ် သည် ..။ တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ် .. ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ ဘသန့်ထူး အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းဘဲ . .။ သူနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ခင်မင်သွားတဲ့ ..မိုးဇော်ဟန် ဆိုတဲ့ ကောင် နဲ့ သူနေတဲ့ ရပ်ကွက် ကို လိုက်သွား သည် . .။ ရပ်ကွက်တွေမှာ လူတွေ ၀ါးထရံတွေကာပြီး ကင်းစောင့်နေကြတဲ့ ကာလ ဖြစ် သည် . .။ မိုးဇော်ဟန် သည် သူ့ရပ်ကွက်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်လို့ ထောင်ကျသွားတဲ့ ကောင်အဖြစ် လူသိများ ခဲ့သူ ပါ ။ . . လူလည်ခေါင်မှာ ခေါင်းမဖေါ်နိုင်အောင် နံမည်ပျက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပေမဲ့ . .အခု တိုင်းပြည် မ အေးချမ်းချိန် ..ထောင်ထဲက ပြန်ထွက်လာသောအခါ ..အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ..လူတွေက လန့်ပြီး မနှိမ်ရဲ . .။
မချိသွားဖြဲ ဆိုသလို ..လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြ သည် . .။ ဥပဒေ မဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နေချိန် ..ထောင်ထွက်တယောက်ကို လန့်ကြ သည် …။ မိုးဇော်ဟန် နဲ့ ဘသန့်ထူး တို့ ဓါးရှည်တွေ ကိုင်ကာ ရပ်ကွက်ထဲ ကင်းဝင်စောင့် သည် ။ ဘသန့်ထူး သည် မိုးဇော်ဟန်ဆီမှာ ခဏ ခိုနေပြီး ..သူ့အပေါ် မကောင်းခဲ့သူများ ကို လက်စားခြေရန် လုံးပမ်းလေတော့ သည် ။ မမနွယ် သို့ စိမ်းလဲ့နွယ် မမနွယ် သည် ထောင်သားတွေ ကို တံခါးဖွင့်လွတ်လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းလဲ ကြားရော အရမ်းလန့်နေ သည် . .။ သူ .. သူ …သူများ လွတ်လာတော့မလား . ..။ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကို အရမ်း လန့်နေသည် . .။ လင်ကြီး ဦးသောင်းစိန် ပန်းသေသွားတော့ . .နဂိုက တဏှာရာဂစိတ် ကြီးတဲ့ မမနွယ် သည် ကာမဆန္ဒမပြည့်ဝတဲ့ ဝေဒနာ က ဖိစီးလာရ သည် . .။ ဦးသောင်းစိန် သည် ပန်းမသေခင်က လဲ အသက်ကြောင့် မမနွယ် ကျေနပ်လောက်အောင် ဖြေဖျောက် မပေးနိုင်ခဲ့ပေ ။ သုတ်လွတ်လဲ မြန်တာကြောင့် ..မမနွယ် ကျေနပ်မှုမရခင် သူက အမြဲ ပြီး သွားလေ့ရှိရာ မမနွယ်မှာ ..အားမလို အားမရ ဖြစ်နေခဲ့ရတာ ကြာခဲ့ရ သည် ။ ဦးသောင်းစိန် သည် သူမထက် အသက်များစွာ ကြီးပေမဲ့ သူမနဲ့သူမ မိသားစု ရှေ့ ရေး အတွက် ကျိတ်မှိတ်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ..မမနွယ်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မှာ အချစ်မပါတာကတော့ သေချာခဲ့ပါ သည် . .။
ဦးသောင်းစိန် သည်လဲ .. အသက်ကြီးသထက် ကြီးလာတော့ ကာမစပ်ရှက်တဲ့ ကိစ္စ မှာ မမနွယ် ကို တာဝန်မကျေတော့ …။ မမနွယ် သည် သူမလိုဘဲ တဏှာရာဂအားကြီးပြီး ..လင်ရှိမယား လဲ .. မေရှာင်တဲ့ ဘသန့်ထူး နဲ့ တွေ့ပြီး ..လင်ကြီးဆိက မရနိုင်တဲ့ ကာမစည်းစိမ်တွေ ကို တ ၀ကြီး ရယူလေတော့ သည် . .။ ဘသန့်ထူး သည် သူမအပေါ် သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် မုန်းတီးနေမည် ဆိုတာကို မမနွယ် သိ သည် . .။ စီရင်ချက် ချတဲ့နေ့က သူမကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဘသန့်ထူးရဲ့ မျက်လုံးများ သည် မုန်းတီးနာကျည်းမှုတွေ အပြည့်နဲ့ . . ။ ခပ်ဝေးဝေး က ထရပ်ကားသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရ သည် . .။ ညမထွက်ရ အမိန့်ကြောင့် ကားသွားကားလာ လုံးဝမရှိလို့ ကားသံကြားရင် စစ်ကားဘဲ ဖြစ်မည် . .။ မမနွယ် ကြောက်နေ သည် . .။ ဘသန့်ထူး လက်စားချေမှာ သေချာသလောက် မို့ပါ ။ အိမ်မှာ ခိုင်းတဲ့ကောင်လေး၂ယောက်ကို တောမှာ ဆန်သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်လို့ အိမ်မှာ လင်ဖြစ်သူ ဦးသောင်းစိန် နဲ့ သူမဘဲ ရှိနေ သည် . .။ မီးကလဲ မှောင်နေသည် . ။ ဖယောင်းတိုင်တွေဘဲ ထွန်းထား သည် . .။ဦးသောင်းစိန် က ပုတီး စိတ်နေ သည် .။ အိမ်အောက်ထပ်က အသံကြား သည် . ။ တခုခု လဲပြိုတဲ့ အသံ …။ ဟဲ့ . ..ဘာသံလဲ . . ဦးသောင်းစိန် မေး သည် . .။ အောက်ထပ်က အသံကို နားစွင့် သည် . .။ မိနီ . .ဘာသံလဲ . . မိနီ ဘာမှ ပြန်မထူး . ..။ အိမ်ဖေါ်မလေးမိနီကို ခေါ်ကြည့်ပေမဲ့ ဘာမှမထူး . .။ နွယ်နွယ် . .အောက်ထပ်က အသံကြားတယ် . . မမနွယ် တုန်ရီတဲ့ အသံ နဲ့ မိနီကို အော်ခေါ် သည် . .။ မိနီ မထူး . .။
ဟိုကောင်ကြီး ..ခင်ဗျားမယား ရဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ယက်လို့ ငါပြောတာ မလုပ်သေးဘူးလား ..ကဲကွာ..နှေးအုံး.. ဖေါင်း ကနဲဖေါင်းကနဲ ..ရိုက် သည် . .။ ဦးသောင်းစိန်လဲ ဒီတော့မှ ပြာပြာသလဲ မမနွယ်ရဲ့ ဖင်ပေါက်ကို လျာနဲ့ ယက်လေ သည် ..။ မပီပြင်ဘူး ..သေသေချာချာယက်စမ်း..ခွေးသူတောင်းစားကြီး ..ကဲကွာ.. ဘုန်းကနဲ ဆောင့်ကန်ပြန် သည် …။ ဦးသောင်းစိန်လဲ ယက်ပြီ..ယက်ပြီ … ဆိုပြီး သူ့လျာပြားကြီးနဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကို ဖိကာဖိကာ ယက်ပါတော့ သည် ..။ တော်တော် ကြာကြာ ယက်ခိုင်းပြီးမှ .. ရပ်တော့ .. လို့ သူ အော် သည် …။ ခွေးသူတောင်းစားကြီး . . ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် နေ.. မင်းမယားလေးကို ဖင်လိုးတော့မယ် … သေသေချာချာ ကြည့်နေ ..ကြည့်ဆို ကြည့်နော် ..မကြည့်ရင် ခင်ဗျား နာမယ် … .. ဟုတ်ကဲ့ပါ..ဟုတ်ကဲ့ပါ … ဘသန့်ထူး လဲ မမနွယ် ရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ အနောက်မှ နေရာဝင်ယူ ရပ်လိုက်ပြီး ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲက နီညိုညို စအိုပေါက်လေး ကို တံတွေးတွေ တပြစ်ပြစ် ထွေးချ သည် ..။ ကောင်မ ..စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ ကောင်မ …နင့်ဖင်ကို လိုးဖို့ ..ထောင်ထဲမှာ ဂေါ်လီတွေ အများကြီးထည့်လာတာ … သူ့ လီးတန်ကြီး သည် မတောင့်တတောင် ဖြစ်နေ သည် ..။
ခွေးသူတောင်းစားကြီး . .ငါ့ လီး မတောင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် …လီးလာစုတ်ပေးစမ်း … ဦးသောင်းစိန်မှာ သူ့ကို လီးစုတ်ခိုင်း လို့ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားလေ သည် ..။ ဒါ..ဒါတော့ မလုပ်ပါရစေနဲ့ … ဘသန့်ထူး ရဲ့ လက်သီး ဆုတ်ကြီးတွေ ဦးသောင်းစိန် မျက်နှာပေါ်ကို ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ကျရောက်လေ ပြီ …။ ကြောက်…ကြောက်ပါပြီ ဗျာ …. မထိုးပါနဲ့တော့ ..အီးဟီး . .. … ကြောက်ရင် ခိုင်းတာကို လုပ်. မမနွယ် သည် ..ဘသန့်ထူး ခြေထောက်ကို မျက်နှာအပ်ပြီး ငိုယို တောင်းပန်လေ သည် ..။ မမနွယ် စုတ်ပေးပါရစေ . .သူ့ကို ချမ်းသာပေးလိုက် ပါ … ဘသန့်ထူး သည် မမနွယ်ကို ရေရေလည်လည် ရိုက်နှက်ပြန် သည် ..။ ဥပဒေ၀န်ထမ်း ဒေါ်သီရိမေ အစိုးရ ဆွဲချ ရှေ့နေမ …. ။ သီရိမေ လဘက်သုတ်နေ သည် . .။ သူတို့လမ်းထိပ်မှာ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေ ကင်းစောင့်နေကြတာကို သီရိမေ လဘက်သုတ် ညတိုင်းလိုဘဲ ပို့ပို့ပေး သည် . .။ တအိမ်တယောက် ကင်းထွက်စောင့်ကြရ သည် . .။ မစောင့်နိုင်တဲ့ မိန်းမသားချည်းရှိတဲ့ သီရီမေတို့လို အိမ်တွေက ကင်းစောင့်သူ လူငယ်တွေကို လဘက်သုတ် ..ကော်ဖီ ..မုံ့တို့ ပို့ပေးကြ သည်. .။
သီရီမေ သည် တကိုယ်တော် အပျိုကြီးမမ မို့ အိမ်ဖေါ်မလေး ပူစူး .. နဲ့အိမ်ကြီးတလုံးမှာ နှစ်ယောက်ထဲ နေ သည် . ။ အရေးအခင်း ဖြစ်တော့ ပူစူး က ရန်ကုန်တဖက်ကမ်း က သူ့အမေ တယောက်ထဲမို့ ခဏ ပြန်ပါရစေ ခွင့်တောင်းလို့ ..သီရိမေ ခွင့်ပြုလိုက် သည် ..။ ပူစူးလဲ မရှိတော့ တယောက်ထဲ ကြောက်သလိုလို ဖြစ်မိ သည် …။ ကင်းစောင့်တဲ့ လူငယ်တွေ ဟာ ဓါးတွေ လှံတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး လမ်းထိပ်က ၀ါးထရံ စည်းရိုးတွေဆီ စကားတပြောပြောနဲ့ လျောက်သွားနေကြ သည် ။ သီရိမေလဲလဘက်သုတ်ဇလုံကိုကိုင်ပြီးအိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးဖွင့်လိုက်ပြီး..ဖြတ်သွားတဲ့လူငယ် တယောက် ကိုလှမ်းခေါ် လိုက် သည် ..။ ဂျန်းဂဲလ်ဟက် စစ်ဦးထုပ်ခပ်ငိုက်ငိုက် ဆောင်းထားသော လူငယ်တယောက် အိမ်ရှေ့က ဖြတ်လျောက်သွားတာ တွေ့လို့ လှမ်းခေါ်လိုက် သည် . .။ ဟေ့..မောင်လေး . .လဘက်သုပ် လာယူပါအုံးကွယ် . .မင်းတို့ ကင်းသမားတွေအတွက် အမ အလှူ လုပ်ချင်လို့ . . ကောင်လေး သူမ အိမ်ဘေးပေါက်ကို ရောက်လာ သည် ..။ ဒီမှာ လဘက်သုပ် ဇလုံ . .အမ ရေနွေးကရားဝင်ယူလိုက်အုံးမယ် . . သီရိမေ မီးဖိုခန်း စားပွဲပေါ်က ရေနွေးကြမ်း ကရားကို ၀င်ယူ သည် . .။ သူမပြန်လှည့်လိုက်သောအခါ မီးဖိုခန်းတံခါးဝ မှာ စောစောက စစ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားသော လူငယ် ကောင်လေးက ပိတ်ပြီး ရပ်နေသည် . .။ မင်း..မင်း . .ဘာလိုချင်လို့လဲ . . ကျုပ် ဘယ်သူ ဆိုတာ သေသေချာချာ ကြည့်စမ်း .. ဟင် . . .မင်း . .မင်း . .. ဟုတ်တယ် . .ကျုပ် ဘသန့်ထူး . . .ခင်ဗျားတို့ မတရား ထောင်ချလိုက်တဲ့ ဘသန့်ထူး ကျုပ်ကို မဒိန်းကောင် ဆိုပြီး စွပ်စွဲခဲ့တာ . .တကယ်တော့ ကျုပ် မဒိန်းကျင့်တာ မဟုတ်ဘူး နှစ်ဦး သဘောတူ လုပ်တာ . . မဒိန်းကျင့်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ..ပြချင်လို့ လာခဲ့တာဘဲ . . . မင်း…မင်း . ..ငါ..ငါ..အော်လိုက်ရမလား . . အော်တာနဲ့ ဒီ ဓါးနဲ့ ထုတ်ချင်းပေါက်အောင် ထိုးထည့်လိုက်မယ် . . ကဲ . .ခင်ဗျား ရဲ့ အိပ်ခန်း ဘယ်မလဲ . .အိပ်ခန်းထဲကိုသွား . . . အိပ်ခန်းက အပေါ်ထပ်မှာ . . ခင်ဗျား ရှေ့က လှေခါးတက် . .ကူလီကူမာ လုပ်မယ် မကြံနဲ့ . .အသေ ထိုးသတ်လိုက်မယ် . . ဒီကောင့် ပုံကြည့်ရတာ တကယ်ဘဲ ထိုးသတ်မဲ့ ပုံ …..။
သီရီမေ သူ့ ရှေ့ကနေ လှေခါးပေါ်တက် သည် . .။ သူမ ခြေထောက်တွေ က မနဲရွေ့နေရ သည် . ..။ ဒူးတွေက တုန်နေလို့ .. .။ သီရီမေ ရဲ့ တင်စိုင်တွေရဲ့ တုန်ခါတာကို အနောက်ကနေ ဘသန့်ထူးက အနီးကပ်ကြည့်ပြီး .. ဟင်း . .ဖင်က တော်တော်ကြီးတာဘဲ . . လို့ပြောရင်း ဖျန်းကနဲ လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက် သည် . .။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီး ..ကဲဟာ..ကဲဟာ…… ဖျန်း.. ….ဖျန်း ….. ဖင်တုံးကြီးတွေကို ရိုက် သည် . . .။ တောက်…ဖင်ကြီးက တော်တော်တောင့်တာဘဲ ..စောက်ဖုတ်ကို အရင်လိုးမယ် . .ပြီးရင် ..ဖင်ပေါက်ကို လိုးမယ် …. အို … ဒုက္ခပါဘဲ..သူ..သူ….ငါ့ကို လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ ကျင့်တော့မယ် ထင်တယ် . . .ဖင်ကို လိုးမယ်တဲ့ . .ဘုရားဘုရား …. သီရီမေ အရမ်း ကြောက်နေ သည် .. ။ တက်လေ . .မြန်မြန် .. ဘာနှေးနေတာလဲ . .. ဖင်ကို အနောက်က တွန်းတာ ခံလိုက်ရ သည် . .။ အိပ်ခန်းထဲရောက် လာတော့ . .ဘသန့်ထူးက ဒါးနဲ့မိုးထားပြီး … နင့် အ၀တ်တွေ အားလုံး ချွတ်စမ်း လို့ပြောရင်း သူ့ ခါးက ခပ်တိုတို စည်းထားတဲ့ လုံချည်ကို ချွတ်ချလိုက် သည် . .။ အို . . . ဘသန့်ထူးရဲ့ ပေါင်ကြားက အမွေးမဲမဲတွေကြားက လီးမဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီး ..ကို သီရိမေ မြင်လိုက်ရ သည် . .။ လီးတန်ကြီး က ..မတ်မတ်တောင်နေ သည် ..။ လီးတန်ကြီး ပတ်လည် မှာ အဖုသီးတွေ နဲ့ ..။ ဘာဖုတွေလဲ …။ ရောဂါတွေများ ဖြစ်နေသလား …။ နိုင်တုံးက လူတွေကို ဖိ နှိပ်စက်ခဲ့သမျှ အခုတော့ ..ပြန်ခံရပြီ …။
အပျိုကြီးမမ သီရီမေအဖို့ အခုလို ယောင်္ကျားတယောက် ရဲ့ လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲ ဗလောင်ဆူသွားရ သည် . .။ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားရ သည်. .။ ချွတ်လေ . .ဘာငိုင်နေတာလဲ . .နင့်ကို မဒိန်းကျင့်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ပြမယ် . .ဒီမှာ . .သီရီမေ . .နင် . .အလိုးခံဘူးလား . . အလုပ်တာဝန် အရ လုပ်ခဲ့တာပါ . .ကျမ..ကျမ …အပျိုတယောက်ပါရှင် ..တခါမှ မကြုံ ဘူးပါဘူး… ဘသန့်ထူး သည် သီရီမေကို ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲလှဲလိုက် သည် ။ မ…မလုပ်ပါနဲ့ . .တောင်းပန်ပါတယ်… ဖျန်း . . သီရီမေ ရဲ့ ပါးကို ရိုက်လိုက် သည် ..။ နင်..ငါ့ကို ထောင်ချတုံးက တရားခွင်မှာ ဒီလို မျက်နှာပေးမျိုး မဟုတ်ဘူး . .တော်တော် ရက်စက်တဲ့ ဟာမ . .သိရောပေါ့ . . သီရီမေ ရဲ့ ထမိန်ကို ရုတ်တရက် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက် သည် . .။ ဟာ…အို ….. အိမ်မှာ နေရင်းမို့ သီရိမေ သည် အောက်ခံ ၀တ်မထား . ..။ ကိုယ်အောက်ပိုင်း ဗလာကျင်း သွားရပြီ . ..။
ဘသန့်ထူးက ဖြူဖွေးတဲ့ ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေ နဲ့ပေါင်ကြားဆုံက ..အမွေး ခပ်ပါးပါး ပေါက်နေတဲ့ သီရိမေ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့် သည် . .။ သီရိမေက လက်နဲ့ ဖုံးကာဖို့ ကြိုးစားတော့ . .ဖျန်းကနဲ ပါးကို ရိုက်ပြန် သည် . .။ ကောင်မ..မကာ နဲ့ …မဖုံးနဲ့ …နာချင်လား . . “ဖျန်း ….” မရိုက်ပါနဲ့ ရှင် . ..မကာတော့ပါဘူး . . မကာတော့ပါဘူး . . အပေါ်ပိုင်း လဲ ချွတ် စမ်း …. ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ …. ဟား…တယ်လှတဲ့ နို့တွေဘဲ .. ဘသန့်ထူး ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ကိုင်လေ သည် …။ ဘသန့်ထူး က သူ့လီးတန်ကြီး ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဒစ်ကြီးကို တံတွေးတွေ ထွေးချလိုက် သည် ။ ဒေါ်သီရိမေ သည် မျက်လုံး စုံမှိတ်ထား သည် ..။ ဘသန့်ထူး ရဲ့ လီးကြီးကို သူမ မကြည့် ရဲ ..။ ဘသန့်ထူး သည် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့ လီးဒစ်ပြဲကြီး ထိုးထည့်မယ် လုပ်ပြီးမှ..မထိုးထည့်သေးဘဲ .. ကောင်မ …မျက်စိ ဖွင့်စမ်း … လို့ ပြောလိုက်ရာ သီရီမေ လဲ ..ကြောက်လန့်တကြား မျက်စိ ဖွင့်ကြည့်လိုက် သည် ..။ ငါ့လီးကို စုတ်စမ်း .. အို .. စုတ်ဆို စုတ်နော် . .နာချင်သလား ..တယ် . . ကြီးမားသော လက်သီးဆုတ်ကြီး နဲ့ ချိန်ရွယ်လိုက်လို့ … စုတ်..စုတ်ပါ့မယ် …. တခါမှတော့ . ..မစုတ်ဘူးဘူး .. လျာမရှည်နဲ့ . .စုတ် . . ဘသန့်ထူး က သူ့ လီးကြီး ဒေါ်သီရိမေ ရဲ့ ပါးစပ်နား ထိုးပေးလိုက် သည် …။ ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ . . . သူ့လီးတန်ကြီးကို မရဲတရဲ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ရ သည် ..။
စူးစူးဝါးဝါး အနံ့ကြီး ရလိုက် သည် . .။ ထောင်သားတယောက် ရဲ့ လီးနံနံကြီး ကို ရှေ့နေမ ငုံလိုက်ရ ပြီ ..။ ဟုတ်ပီ ….စုတ်…စုတ်.. စုတ်လိုက်ချိန် ငန်သလိုလို ခါးသလိုလို အရသာကြီး ကို ရလိုက်ပေမဲ့ မျက်နှာ ရှုံ့မပြရဲ . .။ တော်ကြာ ပါး ပိတ်ရိုက်နေမှ နာနေမည် ..။ သူမ ဆံပင်တွေကနေ ဆွဲကိုင်ကာ သူ့ လီးတန်ကြီးကို ကော့ကာကော့ကာ ထိုး သည် ..။ စုတ်..နင့်လျာ နဲ့ ကလိပေး . .အား . .ဟုတ်ပီ..ကလိ..ကလိ …လျာ နဲ့ ထိုး …အား …ကောင်းတယ် . .လုပ်…လုပ် … ဒေါ်သီရီမေ လဲ လီးတန်ကြီးကို စုတ်လိုက် လျာနဲ့ ကလိပေးလိုက် လုပ်ပေး နေ ပြီ . .။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ …။ တရားသူကြီးမ …. ။ အရေးအခင်း ဖြစ်ချိန် ဒေါ်ခက်ခက်မာ အိမ် မှာ ဆန် ပြတ်နေတာ ကြာပြီ ..။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ဆန် မှာထား သည် ..။ သူ့ တပည့်လေး တယောက် ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဆန်လာ ပို့ခိုင်းထား သည် ..။ အရေးအခင်း အချိန် မို့ လူတွေ ငတ်ပြတ်နေကြ သည် …တဲ့ ..။ ဆန်အိတ် ထမ်းလာရင် ၀ိုင်းလုကြ သည် ဆိုလို့ တပည့်လေးကို ဖွက်ပြီး သယ်ခဲ့ဖို့ ပြောထား ရ သည် . .။ အိမ်မှာ ဒေါ်ခက်ခက်မာ တယောက်ထဲ ..။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ သည် နံမည် နဲ့ လိုက်အောင် မာ သည် . .။ ခက်ထန် သည် …။ သည်လို ခက်ထန် မာကျောလွန်းလို့ သူ့ လင် ဖြစ်သူ ဦးစိုးဝင်းကျော် သည် သူမ ကို ကွာရှင်းကာ ပြေးပြီ . .။ ပြေးတာမှ ဝေးလေ ကောင်းလေ ဆိုပြီး ..နိုင်ငံခြားကို အပြီးအပိုင် ထွက်သွားလေ သည် …။ မာနအလွန်ကြီးသော ဒေါ်ခက်ခက်မာ သည် လင် မရှိလဲ ဂရုစိုက်စရာ မရှိ ဆိုပြီး ..အိမ်ဖေါ်တွေနဲ့ နေ သည် ..။
ခက်ထန်လွန်း မာလွန်းတော့ အိမ်ဖေါ်တွေလဲ ပြေး ကုန် သည် ..။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလဲ စိတ်ပုတ်သော သူမ နဲ့ ဘယ်သူမှ နီးနီး မနေလိုကြပေ . .။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ သည် ဆန်အိုးထဲ ဆန် မရှိမှန်း မသိ ..။ အိမ်မှာ ချက်မစားတော့ ဘယ်သိမလဲ . .။ တခါတရံမှဘဲ ချက်စား သည် . .။ အိမ်ဖေါ်တွေ မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း . .အပြင်မှာဘဲ စားတာ များ သည် ..။ တရားသူကြီး မို့ ကျွေးမဲ့ လူတွေက ပေါများ သည် . .။ လဒ်လာဘက ရွင် သည် ..။ အခု အရေးအခင်း ဖြစ်တော့ ..အိမ်ထဲမှာဘဲ အောင်းနေရတော့ အိုးထဲ ဆန်မရှိတာ သိတော့တာဘဲ . .။ ပထမ တရက် နှစ်ရက် ဖြစ်သလို ကော်ဖီဖျော်သောက် .. မုန့်ကျွတ် ကို ယိုသုတ်ပြီး စား ..သည် ..။ ရပ်ကွက်ထဲက သူမကို တရားသူကြီး မှန်း သိတဲ့ ဆင်းရဲသားထဲက အရင်က မုန်းတီးခဲ့သူတွေ သည် ညပိုင်းမှာ ..ညစ်ညစ် ညမ်းညမ်း အိမ်ရှေ့ကနေ လာဆဲကြတာ ခံရ သည် ..။ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လိုဘဲ ဖြစ်နေ သည် ..။ ညဘက်ဆို ရင် မီး မရှိ ..။ ရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ လှံတွေ ..ဒါးတွေနဲ့ လူတွေ လမ်းသလားနေကြ သည် …။ ဂျင်ကလိ ဆိုတာတွေ လဲ ခေတ်စားနေ သည် …။ ဒေါက် ဒေါက် ..ဒေါက် .. ဟော.. တံခါးခေါက် သည် . .။ ဆန်လာပို့ပြီနဲ့ တူ တယ် . . .။ သူမ တံခါးကို ခပ်မြန်မြန်ဘဲ ဖွင့်လိုက် သည် . .။ မောင်စိုးလား . .ဆန်အိတ် ပါလာပြီ လား . . လူငယ်တယောက် အိမ်ထဲ ၀င်လာ သည် . .။
မင်း ဘယ်သူလဲ . .မောင်စိုးကော … လူငယ်က တံခါးကို အထဲက ပြန်ပိတ် ဂျက်ထိုးလိုက် ပြီး .. ကျုပ် မောင်စိုး မ ဟုတ်ဘူး .. ခင်ဗျားကို မဒိန်းကျင့်ဖို့ ရောက်လာတဲ့ ကောင် ..ခင်ဗျား မဒိန်းမှုနဲ့ ထောင်ချလိုက်တဲ့ ကောင် ကျုပ် မလုပ်ဘဲ ထောင်ကျခဲ့ရတယ် … . .ဒါကြောင့် ခင်ဗျားကို မဒိန်း လာကျင့်တာဘဲ ..ကဲ ..အိမ်ခန်းထဲ ၀င် . . လို့ ခက်ထန်မာကျောစွာ နဲ့ ပြောလိုက် သည် ..။ ဟင် . .မင်း…မင်း . ..ဟို…ဟို ..ကောင် . . ဟုတ်တယ် . .ကျုပ် ဘသန့်ထူး … မှတ်မိပြီ မှုတ်လား . . ဖျန်းကနဲ ပါးပိတ် ရိုက်တာ ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားရ သည် .။ ဘသန့်ထူး သည် လူးလဲထဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန် သည် ..။ လဒ်စားတဲ့ သေနာမ …အခု နင့်ဖင်ကို လိုးမယ် . .ငါ့ကို အမှုလုပ်ပြီး ထောင်ထဲသွင်းတဲ့ မမနွယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မကိုလဲ ဖင်လိုးခဲ့ ပြီးပြီ . .။ ဆွဲချရှေ့နေမ ကိုလဲ ဖင်ကော စောက်ပတ်ကော အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လိုးခဲ့ပြီးပြီ . .ဒါ နင့်အလှဲ့ဘဲ …ကဲ အ၀တ်တွေ ချွတ်စမ်း … ဒေါ်ခက်ခက်မာ ရေရေလည်လည် ကြောက်နေပြီ ..။ မဆင်မခြင် တံခါး စွတ်ဖွင့်မိလိုက်တဲ့ မိမိ အမှားကို နောင်တရလို့ မဆုံး . .။ ချွတ်လေ . .ဘာငိုင်နေတာလဲ ..ဒီမှာ ကြည့် ..ငါ ချွတ်ချလိုက်ပြီ . .ဒီမှာ နင့်ကို လိုးမဲ့ လီး . . ဒေါ်ခက်ခက်မာ ကို ရိုက်ရန် သူ့ လက်ဖ၀ါးကြီးနဲ့ ရွယ်လိုက် သည် ..။ ဒီတော့မှ . . ဒေါ်ခက်ခက်မာ အ၀တ်တွေ ချွတ် သည် ..။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ဗလာကျင်းသွားပြီ .. ။ အ၀တ် ဘာမှ မရှိတော့ဘဲ ဖင်အပြောင်သား နဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး . .ဖြစ်သွားပြီ ..။
ဒီမှာ တွေ့လား . .နင့်ကို ဖင်လိုးတဲ့အခါ နင် အရသာ ထူးအောင် ဂေါ်လီတွေ ပတ်လည် ထည့်လာတာ …လာ အရင် လီးလာ စုတ် … ဒေါ်ခက်ခက်မာ သည် လီးစုတ်ခိုင်းနေတော့ ရုတ်တရက် ကြောင်ကာ ငြိမ်နေ သည် ..။ လီး လာစုတ်လို့ ငါပြောနေတာ မကြားဘူးလား . .နင် နာချင်လား . . ဒေါ်ခက်ခက်မာ သည် ခက်သည် . .။ မာ သည် . .လေ ။ မစုတ်ဘူး . .နင့်လိုကောင်ရဲ့ လီးကို ဘယ်တော့မှ မစုတ်ဘူးဟဲ့ . .. ဖြောင်းကနဲ အုံးကနဲ သူမကျောပြင်ကို ဗျောတင်တာ ခံရပြီ . .။ ခိုင်းရင်လုပ် . .နင် နာမယ် . . သူမ လက်ကို နောက်ပြန်လိမ်ချိုးတာ ခံရတော့ နာကျင်မှုကြောင့် … တော်ပါတော့ . .လုပ်ပါ့မယ် … လို့ ပြောမိသွား သည် ..။ နံစော် ညစ်ပတ်တဲ့ လီးညိုညိုကြီးကို အောင့်အီးပြီး စုတ်လိုက်ရ သည် ..။ စုတ်..လျာကို သုံး . .လျာနဲ့ ထိုး .. လီးကို ကိုက်မယ် မကြံနဲ့နော် ..လည်ပင်း လှီးလိုက်မယ် . .ဒီမှာ တွေ့လား . . လက်ထဲက ငှက်ကြီးတောင် ဓါးရှည် ကို ပြ သည် . ..။ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ရဲ့ ဖင်ပေါက်ကို သူ့ ဂေါ်လီတွေ ထည့်ထားတဲ့ လီး တုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ သူ လိုးနေချိန်မှာ တံခါးခေါက်သံ ကြားလိုက် ရ သည် ..။ ဒုံးဒုံး . . ဒုံး ..ဒုံး ..ဒုံး ….. ဘသန့်ထူး သည် ယခု တကယ့် မဒိန်းကောင် ဘ၀ကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ …။ ဒုံး..ဒုံး …ဒုံး … ဘသန့်ထူး သည် အညှိုးကြီးကြီး နဲ့ ဒေါ်ခက်ခက်မာ ရဲ့ ခါးလေးကို လက်၂ဘက်နဲ့ စုံကိုင်ဆုတ်ပြီး ..အားနဲ့ ဆောင့်လိုးနေသည် …။ ဘသန့်ထူးရဲ့ ဂွေးစိကြီးတွေက ဒေါ်ခက်ခက်မာ ရဲ့ ဖင်ကြားကို တဘတ်ဘတ် ရိုက်ခတ်နေ သည် ..။